Sarkaalka madaxa fulinta ee gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dalka oo soo dhaweeyay soo jeedimaha gudiga loo xil saaray in ay baaritano ku sameeyan IEBC – The Voice of Northeastern Kenya
Sarkaalka madaxa fulinta ee gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka dalka oo soo dhaweeyay soo jeedimaha gudiga loo xil saaray in ay baaritano ku sameeyan IEBC
Sarkaalka madaxa fulinta ee gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Ezra Chiloba ayaa soo dhaweeyay soo jeedimaha gudiga isku dhafka ah ee ka kooban xildhibaanada ka soo kala jeeda labada isbahaysi ee kala ah CORD iyo Jubilee kuwaas oo baaritano ku waday gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano IEBC.
Mr Chiloba ayaa xili u warbaahinta kula hadlaayay magaalada Mombasa waxa u sheegay in soo jeedimaha gudiga ay yihiin oo kaliya qorshaha ay horey u dajiyeen kaas oo ku aadan sida ay u qaban lahaayen doorashada xigta ee dalka ka dhacayso.
Warbixiinta ay gudiga isku dhaafka ah soo saaren ayaa waxa maalinta khamiista ahayd la horgeeyay aqalada barlamaanka iyo kan senetka.
Mr Chiloba ayaa waxa u sidoo kale sheegay in inta aysan bilaabmin dibad baxyada ka dhanka ah gudiga IEBC ay doonayen in sharciyada cusub ee wax looga badalaayo gudiga in ay barlamaanka ansixiyaan biishi june.
Sarkaalka oo hadalkiisa si wato ayaa waxa u raaciyay in xildhibaanada barlamaanka ay dadajin doonan in ay meel mariyaan sharciyada cusub ee wax looga badalayo gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xudduudaha dalka ka hor inta aysan dalka ka dhicin doorashada lagu wado in ay dalka ka qabsoonto biisha August ee sanadka inagu soo aadan.
Isbuucan ayay ahayd marki gudiga IEBC ay xayeysiiyen shaqada ah in ay doonayan in ay helaan shaqsi ama shirkad warqadaha codeynta ah gaarsiiso dhamaan waddanka kuwaas oo la doonayo in loo isticmaalo doorashada 2017-ka.
Sarkaalka madaxa fulinta ayaa waxa u sidoo kale sheegay in 18-ka bilyan ee loo qondeeyay in ay u adeegsadaan diyaar garowga doorashada dalka ka dhici doonta sanadka inagu soo aadan in ay tahay mid ku filaan.
Gudigan u madaxa ka yahay Ahmed Isack Hassan ayaa waxa ay shaaca ka qaaden in ay doonayan in ay sare u qaadan tirada shaqaalahooda iyago doonayo in ay ka dhigaan 300,000 halka tirada gawaarida ay isticmaalayan ay doonayan in ay iyagana ka dhigaan 35,000.
← Booliska dalka oo wadada isku xirta magaalooyinka Nairobi iyo Nakuru ku qabtay mandooriyaha noociisa Heroine
Taliban oo qabsatay magaalada Khanabad ee ku taala gobolka kunduz ee waddanka Afghanistan →